Xog Culus:Madaxda dowladda oo isku khilaafay muxaadarada Sheekh Umal iyo arin laga cabsi qabo | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xog Culus:Madaxda dowladda oo isku khilaafay muxaadarada Sheekh Umal iyo arin laga...
Xog Culus:Madaxda dowladda oo isku khilaafay muxaadarada Sheekh Umal iyo arin laga cabsi qabo
Warar aan ka heleyno madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in mas’uuliyiinta dowladda ay isku khilaafeen sidii laga yeeli lahaa muxaadarada Sheekh Maxamed Cabdi Umal ee la qorsheeyey in Axadda lagu qabto garoonka Injineer Yariisow.
Mas’uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo jeediyay in la baajiyo muxaadarada, halka la sheegay in uu diiday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, sida ay noo sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Saraakiil ka tirsan Wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta Soomaaliya iyo guddi arrimaha diinta qaabilsan oo ka tirsan Villa Somalia ayaa soo jeediyay in aan la qaban Muxaadaradaan, ayaga oo ku dooday inay sababi karto isku dhacyo diimeed, balse waxaa diiday Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Culimada suufida ayaa wacad u maray inay hor-istaagi doonaan muxaadaradan ayaga oo qorsheeyey dibad-baxyo ballaaraan oo ka dhacaya garoonka Injineer Yariisow. Waxaa sidoo kale xog lagu hayaa inay taageerayaal badan ay ka dhaadhiciyeen inay gudaha u galaan garoonka, kana hortagaan muxaadarada.
R’aiisul Kheyre ayaa qalad ku tilmaamay isku dayga culimada qaar isku hortagayaan Muxaadarada Sheekh Umal islamarkaana la qaban doono Muxaadarada waxaana taagan khilaaf arintaan ku saabsan.
Sidoo kale saraakiisha madaxtooyada ayaan isku wada raacsaneen in la joojiyo Muxaadarada balse waxaa muuqata in ay sababi doonto isku dhacyo dhanka diinta iyo fowdo ka bilaabata magaalada Muqdisho.
Culimada suufida ayaa ku eedeeyey Sheekh Umal inuu “aflagaadeeyey nebigga NNKH” ayaga oo soo xiganaya hadal uu hadda ka hor jeediyey oo uu ku sheegay “in tinta nebiga NNKH laga helay injir”.
Qaar kale ayaa sidoo kale ku eedeeyey inuu horey u taageeray kooxaha xagjiriinta ah ee dagaalka ka wada Soomaaliya. Sheekh Umal waa uu iska fogeeyey dhammaan eedaha loo jeediyey.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sidoo kale ku eedeeyey Sheekh Umal inuu “murtadiin ku tilmaamay” mas’uuliyiintii dowladda Sheekh Shariif. Waxaa dadkaas ka mid ah xildhibaan Fiqi iyo xildhibaan Mahad Salaad.
Cabsida ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah in garoonka Injineer Yariisow ay ka dhacaan rabashado u dhaxeeya taageerayaasha Suufida iyo kuwa Umal, taasi oo sababi karta dhimasho iyo dhaawac.
Muxaadarada oo la qorsheeyey inay maanta dhacdo ayaa dib loo dhigay ilaa axadda. Badweyn ayaa ogaatay in sababta ay ahayd cabsida amni ee la qabo, inkasta oo dowladda ay sheegtay sabab kale.
Previous articleSawirro:Madaxweyne Deni oo kulan Xasaasi ah la yeeshay Golayaasha kala duwan ee Puntland
Next articleDowlada Kenya oo Sindadabyo Diblomaasiyadeed oo Hore Leh Ku Dhacday !!!
Xog Dhameystiran Sida ay Wax Uga Dhaceen Maanta Yaaqshiid & Midkood Wiilashiii Oo Dhintay
Fahad Yaasiin oo lagu wareegay saraakiil Al-Shabaab oo laga soo dejiyay Garoonka Aadan Cadde
XOG:Kheyre oo dhaqaalo xumo xoogan soo wajahday iyo codsi dhaqaalo udirsaday Qadar xili doorashooyinka…
Marxalad hor leh miyuu galay xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya?
War cusub oo kasoo kordhay Nin ay sheegtay Wasaarada Caafimaadka in laga helay Caronavirus
Dagaal caawa ka dhacay Magaalada Muqdisho & Wararkii ugu dambeeyey
BF oo warbixin xasaasi ah soo saaray, xukuumada iyo gobolka Banaadir oo musuq-maasuq sameeyey iyo $20 milyan oo la...
SAWIRO: Saraakiil iyo Saraakiil xigeen Soomaali ah oo Tababar heer Caalami ah loogu soo xeray Dalka Turkiga..
Tirada Soomaalida Cudurka COVID 19 ugu geeriyootey Ingiriiska oo la shaaciyey